iFixit inotyora iyo iPhone 13 Pro ine zvinoshamisa | IPhone nhau
Segore rega, iFixit inotiunzira "kuputsa" kwayo yeiyo mudziyo kutiunzira zvizere ruzivo rwekuti iyo iPhone 13 Pro yakaita sei mukati uye zvinhu izvo gore rino zviri mukati. Gore rino, ivo vakakwanisa kuwana kushamisika muzvinhu zveFace ID uye kuratidza nhau dzinogona kukanganisa shanduko yechiratidziro chechigadzirwa.
Usati waongorora zviri mukati meiyo iPhone nyowani, iFixit yakaita X-ray scan kwatinogona kuona bhatiri rakaumbwa neL, iyo MagSafe's magineti mhete, uye zvakare Image Kudzikamisa magnets a padhuze necomputer wedunhu. Chimwe chezvakakurumbira ndechekuti iyo iPhone 13 Pro inoita kunge iine tambo inouya kubva kune imwe yema sensors ari pamusoro ayo, sekureva kweIFixit, anogona kukonzera matambudziko kana ichigadzirisa mudziyo.
Kana isu tichienderera mberi nekuona mepu, iyo Taptic Injini iri mukati uye inotarisira kudzora Haptic Kubata, inoita kunge iri diki muhukuru kupfuura mamwe makore. Zvisinei, yakakura kupfuura mamwe makore uye yakawedzera huremu hwayo kubva pa4,8 gramu iyo yaiyera mu iPhone 12 Pro kusvika 6,3 iyo inorema nhasi. Kuenderera mberi mukuenzanisa neiyo iPhone 12 Pro, iyo nyowani Pro modhi inobvisa chiyeki chekutaurisa chakaiswa pachiratidziro nekuchiisa pakati pekamera yekumberi iyo Face ID module, a measure iyo yaizogonesa kutsiviwa kwechidzitiro. iFixit inofungidzira kuti Apple iri kushandisa yakasanganiswa yekubata OLED mapaneru ayo anosanganisa iyo yekubata uye maOLED materu ekuratidzira, ichideredza mutengo, ukobvu uye nhamba yetambo dzekugadzirisa mukati mechigadzirwa.
Iko kukanganisa kweiyo nyowani dhizaini yechigadzirwa ndeye mvura inlet identifier uye iyo spot purojekita yeiyo iPhone 13, iyo yakabatanidzwa kuita imwechete module uye yakabvumira Apple kudzikisa saizi yeiyo notch paPhones gore rino. Naizvozvi, ivo vakagadzirawo Face ID Hardware yakazvimirira pachiratidziri.
Zvinoenderana neIFixit, kunyangwe isina kubatika yeiyo Face ID module uye iyo skrini, chero chinotsiva chinovhara chinoremadza Face ID. Izvi zvinoreva kuti kutsiva kwescreen kusingabvumidzwe neApple kuchasiya zvishandiso zvedu pasina kugona kuvhura neFace ID. (kuvhura kana kuratidza kune chero chiito chinosanganisira kuzivikanwa kwechiso).
Nezve kugona kwebhatiri, iyo iPhone 13 Pro inoshandisa 11,97Wh, yakaenzana ne3.095mAh, ichienzaniswa ne2.815mAh yeiyo iPhone 12 Pro. Iyo bhatiri muiyo iPhone 13 Pro ine dhizaini-yakaumbwa L-gore rino, shanduko kubva kubhatani rekona rinoshandiswa muPro modhi yegore rapfuura. iFixit inoti bhatiri bhatani bvunzo dzakabudirira, kunyangwe paine runyerekupe rwekuti kutsiva bhatiri kwaisazogoneka.
Mukati mune 6 GB ye RAM, Pamwe pamwe neakawanda Apple-yakagadzirirwa Ultra-wideband uye emagetsi manejimendi machipisi, uye zvisingaite, iyo iPhone 13 Pro yakagadzirirwa Qualcomm's SDX60M modem uye izvo iFixit inotenda kuva 5G transceiver. Muongorori ane mukurumbira, Ming-Chi Kuo, akadaro Qualcomm's modem chip mune ino iPhones yegore ine satellite yekutaurirana mashandiro, asi kana iripo, iFixit haina kucherechedza uye Apple haina kuvhura kutaurirana nezvayo muKeynote, saka zvinoita sekunge kuita uku kwasvika pasina. Bloomberg yakajekesa kuti Apple iri kushanda pane setiraiti ficha iyo inobvumidza vanhu kutumira mameseji mune emergency mamiriro vachishandisa satellite kubatana, asi iko kushanda hakutarisirwe kusvika 2022.
Kana iwe uchida kuziva kuti iFixit kuputsika zvakadzama, isu tinokusiya iwe pano chinongedzo kuitira kuti iwe ugone kuiongorora uye uwane zvese zvikamu zvinoshongedza iyo nyowani Apple mureza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 13 » iFixit inoputsa iyo iPhone 13 Pro nekushamisika
Iko kusinganzwisisike kuwedzera mumutengo weBeats Flex